Qalabka dib u soo kabashada faylka ee khaldan - [How to recover by 3 step]
Your location:Data recovery software>>so>Qalabka dib u soo kabashada faylka ee khaldan
Qalabka dib u soo kabashada faylka ee khaldan
Iyada oo ah aalad loo adeegsado soo kabashada faylalka caadiga ah, Bplandatarecovery wuxuu si fudud u fududeynayaa habka soo kabashada si joogto ah, taasoo u oggolaaneysa dadka isticmaala Xiaobai inay bartaan waxyaabaha aasaasiga u ah waqti gaaban. Hadda aan soo bandhigo si faahfaahsan sida loo isticmaalo Bplandatarecovery si loogu fuliyo tirtirka shilka, qaabaynta iyo habka dib u soo kabashada halkaas oo qaybinta aan la furi karin. Tababarkaani wuxuu adeegsanayaa nooca tijaabada ah ee bilaashka ah ee Bplandatarecovery laga soo dejiyay websaydhka rasmiga ah Habka dib u soo kabashada qaaska ah waa sidan soo socota:
Tallaabada 1: Orod Bplandatarecovery software. Ka dib markii la soo dejiyo softiweerka, waa xirmo isku dhaf ah.Waxaad ubaahantahay inaad masaxdid si aad u socodsiiso softiweerka .. Laba jeer dhagsii codsiga Bplandatarecovery si aad u furato softiweerka. Hadaadan furin, howlaha qaar ee softiweerku si sax ah uma shaqeyn doonaan. Tallaabada 2: Xulo qeybtii faylka loo baahan yahay in lagu soo celiyo, ka dibna riix batoonka "Soo-celinta faylka" ee ku yaal barta toolbaarka. Ugu horreyntii, diskiyada u baahan inay go'aamiyaan macluumaadka ka maqan ayaa lagu soo bandhigi karaa barnaamijka softiweerka ah. Haddii diskku uusan ku muuqan barnaamijka softiweerka, waxaad isku dayi kartaa inaad dib ula xiriirto; haddii aan wali la aqoonsan, waxay u badan tahay inuu diskku leeyahay cilad xagga jirka ah, markaa softiweerka aan dib looga soo kaban karin, waxaadna u baahan tahay inaad la xiriirto adeegga macaamiisha khadka tooska ah si loo xalliyo. Tallaabada 3: Guji batoonka "Start" si aad u bilowdo iskaanka iyo gorfaynta. Fursadaha dib u soo kabashada, Xiaobian wuxuu kugula talinayaa inaad iskaanka u dhigto jaangooyooyinkii hore ee barnaamijka, maxaa yeelay dejimaha caadiga ah waa barnaamijka ugu fiican ee iskaanka ka dib markii la sameeyo falanqayn dhameystiran oo softiweer ah, taas oo hubin karta in kiisaska intooda badani ay fiicantahay. Saamaynta soo kabashada. Tallaabada 4: Sahaminta faylasha lumay. Isticmaalayaasha ayaa dib u eegi kara xogta ka soo baxday natiijooyinka iskaanka waqti kasta. Xulo feyl ku yaal dhinaca midig ee softiweerka, waxaad ka arki kartaa muuqaalka faylka qeybta software-ka; haddii aad laba-guji feylka, waxaad furi kartaa daaqadda muuqaalka faylka ee muuqaalka hoose ku yaal, waqtigan waxaad arki kartaa faylka oo dhameystiran. Adiga oo fiirinaya feylka, waxaad si sax ah u heli kartaa faylka u baahan dib u soo kabashada oo hubi in faylka uu waxyeello gaadhay. Tallaabada shanaad: Nuqul faylasha. Haddii aad rabto inaad dhammaystirto soo kabashada faylka, waxaad u baahan tahay inaad koobi ka samayso natiijada natiijada iskaanka. Hubi feylasha ama faylka loo baahan yahay in dib loo soo celiyo, midig-guji oo dooro "Nuqul ku Fayl Faahfaahin", sida ka muuqata sawirka hoose. Intaa ka dib, softiweerku wuxuu soo furi doonaa daaqad loogu tala galay isticmaaleha inuu dejiyo diskka bartilmaameedka si loo badbaadiyo faylasha soo kabsaday. Ka dib markii nuqulkii faylka la dhammeeyo, hawsha raysashada ayaa dhammaatay. Su'aalaha la soo celiyo ee softiweerka faylasha soo kabashada
Ma jiraa nooc tijaabo ah oo softiweer ah soo kabashada xogta? Ma tijaabin karaa ka hor intaadan iibsan? Kahor intaadan iibsan softiweerka, waxaad isku dayi kartaa dhammaan howlaha softiweerka bilaashka ah. Nooca tijaabada ah ee bilaashka ah wuxuu baari karaa xogta lumay sida nooca diiwaangashan, ka dibna adoo fiirinaya feylka, waad xukumi kartaa haddii faylka si caadi ah looga soo kaban karo. Sidaa darteed, kahor iibsashada, waxaad si buuxda u fahmi kartaa heerka soo kabashada xogta. Faylasha lagu soo bandhigay natiijada skaanka ma lagu koobiyeyn karaa qeybta halka xogta lagu soo celinayo?
Maya. Xogta la soo ceshay waxay u baahan tahay in lagu nuqulo diskiyada kale si looga hortago in xogta dib loo qorin. Iyo, kahor inta aan xogta la soo ceshan, waa reebban tahay in xogta loo qoro diskka ama qaybta halka xogta laga lumo. Bplandatarecovery wuxuu soo saaray nooc cusub, miyaan bilaash ku cusboonaysiin karaa?
Haa. Kaliya soo dejiso nooca ugu dambeeyay websaydhka 'Bplandatarecovery'. Saadaalintii xogtii natiijada natiijada baaristu way fashilantay, maxaa dhacay? Faylasha ma laga soo kaban karaa? Sababaha suurtagalka ah ee fekerka dhicitaanka feylka ayaa ah: faylka waa la dhaawacay, faylkuna ma taageerayo sahaminta. Waad qaadan kartaa shaashadda ama sawir ka bixin kartaa khaladaadka degdega ah, ka dibna u dir adeegga macaamiisha ee internetka si ay kaaga caawiso go'aaminta in faylka si caadi ah loo soo celin karo. Soo-koobista kor ku xusan waxay ku saabsan tahay barnaamijka kabashada faylka iyo sida loo sameeyo tirtirka tirtirka shilka iyo dib u soo kabashada faylka. Waxaan la kulmi doonaa xog luminta mustaqbalka. Dhibaatooyinka, waxaad u soo celin kartaa xogta si nidaamsan. Software soo kabashada xogta waxay leedahay howlo awood badan iyo saameyn wanaagsan oo soo kabasho ah, laakiin taa macnaheedu maahan inaad soo ceshan karto faylasha lumay 100% waqti kasta .. Sidaa darteed, haddii aad ogaato in faylalka lumay, waa inaad joojisaa dhammaan howlaha qoritaanka isla markaaba si looga hortago in faylasha lumay la baabi'iyo. Intaa waxaa sii dheer, tifaftiraha ayaa xusuusinaya qof kasta in kastoo faylka dib u soo kabashadu ay fududahay, haddana xog muhiim ah wali waa in la xoojiyaa. Ugu dambeyntiina, haddii aad wax dhib ah ku qabtid habka soo kabashada xogta, waxaad ka hubin kartaa casharro kale boggaga rasmiga ah ee Bplandatarecovery, ama la xiriir adeegga macaamiisha khadka tooska ah.
PreSoo kabashada faylasha muhiimka ah si lama filaan ah ayaa loo tirtiray
NextQaabka adag ee taleefanka gacanta lagu soo celiyo